SABOTSY 24 MARSA 2018
TSY FANDRIAMPAHALEMANA AO IHOSY : Nivoaka ny fonja ry Kohingy sy ny namany izay efa nahafaty olona dimy
Nivoaka ny fonja ny alatsinainy teo i Kohingy, dahalo raindahiny sy namany fito lahy, izay nangalatra omby miisa 516, ka nahafaty tompon’omby dimy mianaka ny 16 avrily 2014, tao Soaserana Kaominina ambanivohitra Soamatasy Ihosy. 5 janvier 2017
Araka ny loharanom-baovao ny 3 jolay 2014 izy ireo no naiditra am-ponja vonjimaika ao Ihosy dia izao nivoaka ny fonja izao fa lany hono ny fotoana nitazonana vonjimaika tany am-ponja azy ireo na « mandat de dépôt ». Matahotra ny valifaty mety hataon’ireto jiolahy ireto arak’izany ny mpitory an’ireto farany sy ny mponina any an-toerana.
Araka ny voalazan’ny mponina ao Ihosy efa tratra niaraka tamin’ny jiolahy rain-dahiny fantatra amin’ny anarana Tokanono tany Betroka i Kohingy nandritra ny « opération Tandroka », tamin’ny taona 2012 ary nalefa tany Antananarivo nefa dia mbola afaka ihany taty afara.
Manao antso avo amin’ny mpitondra araka izany ny mponina ao Ihosy mba hanara-maso izao fivoahan’ireto jiolahy ireto ny fonja izao. « Manahy ny mety hisehoan’ny firongatry ny tsy fandriampahalemana indray aty Ihosy izahay raha tsy haverina any am-ponja i Kohingy sy ireo namany », hoy izy ireo. Andrasana araka izany ny fepetra horaisin’ny fitondrana mahefa manoloana izao toe-javatra izao.
Tsy naharototra ny vahaoka i Hery Rajaonarimampianina FITSIDIHANA TAO AMBILOBE (436) 20 mars 2018 Vazaha teratany frantsay maty vokatry ny tifitra nahazo azy FANAFIHANA MORONDAVA (317) 23 mars 2018 Saron’ny zandary ireo jiolahy nahavanon-doza FANAFIHANA MAHERY VAIKA TENY ITAOSY (284) 19 mars 2018 Miparitaka ao Toamasina, lasa fitaovam-panaparam-pahefana KARATRA « ASSISTANT PARLEMENTAIRE » (278) 19 mars 2018 Nitombo iray indray ireo kandidà hofidiana FIFIDIANANA FILOHAM-PIRENENA (268) 19 mars 2018 Mitoka-monina i Antsiranana noho ny tsy fandraisan’andraikitry ny mpitondra DEPIOTE JOCELYNE MAXIME (260) 21 mars 2018